मोबाइल हरायो ? पत्ता लगाउन अब अनलाइनबाटै दर्ता - Tamang Online
हराएको व्यक्तिले यसरी अनलाइन दर्ता गर्दा आफ्नो नागरिकता, पासपोर्ट अथवा परिचय खुल्ने कार्डको स्क्यान कपी भने राख्नुपर्नेछ । अन्त्यमा इमेल राखेर त्यसलाई सबमिट गरेपछि त्यो खोज्ने प्रक्रियामा अघि बढ्छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार यसरी प्रयोगकर्ताले उपलब्ध गराएको जानकारी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसम्म पु¥याइन्छ । सेवा प्रदायकले पनि उक्त मोबाइल प्रयोगमा रहेको अवस्थामा पत्ता लगाउन सजिलो हुने भएकोले त्यहाँ पहिले उक्त जानकारी उपलब्ध गराइएको उहाँले बताउनुभयो ।
« मेडिकल छात्रामाथि के हुन्छ ब‌ंगलादेशमा ? (Previous News)
(Next News) जलविद्युत् कम्पनीको शेयर आउदै , कमजोर कम्पनीका सेयरबाट प्रतिफल मुस्किल »